Ra’iisul Wasaare Rooble oo magacaabay guddiga farsamo ee hirgelinta doorashada.
June 9, 2021 Xuseen 2
Puntlandtimes (Muqdisho)-Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu magacaabay Guddi Farsamo heer sare ah oo u qaabilsan hirgelinta doorashada dadban ee lagu wareejiyay.
Waxaa guddigaan oo ka kooban 10 xubnood ay isugu jiraan la-taliyeyaashii Ra’iisul Wasaaraha, waxaana ay Shaqadoodu tahay inay la wareegaan arrimaha maamulka Doorashada, isku xirka Guddiyada Doorashada kala duwan, maamulka dhaqaalaha iyo xiriirka Beesha Calaamka.
Hoos Ka Akhriso Magacyada Guddiga uu Magacaabay Ra’iisul Wasaaraha.
1-C/qaadir Cilmi Cali – Xiriiriye
2- Avv. Cumar Maxamed Cabdulle
3- Faduma Cabdi Cabdi
4- Maxamud Maxamed Rooble
5-Layla C/kariim Maxamed
6-Liiban Rabiile Good
7-C/llaahi Xaashi Xasan
Mä guddi baa la magacaabi uun?,goor iyo ayaan.waar wixiiina iska walaaqda
Mucaaradow waxaad ku gowracantihiin mr rooble hadii uu wax qaldo iyo haduu wax saxaba waa in aad si sharuud la,aan ah ula shaqeydaan , hadii kale libaaxa aad ka qeylideen ayaa la idinku wacayaa kkkkkkkkk